Irkutsk State University - Get Higher Education in Rosia
fanafohezan-teny : NY ANY
Aza adino ny hadihadio Irkutsk State University
Misoratra anarana ao amin'ny Irkutsk State University
Irkutsk State University naorina tamin'ny Oktobra 1918 in Irkutsk.
Ankehitriny Irkutsk State University dia lehibe ara-tsiansa sy ny andrim-panjakana fanabeazana fanofanana mpianatra ao amin'ny humanities, voajanahary, ara-teknika ary nampihatra siansa. ISU trano dia ahitana 7 fanabeazana andrim-panjakana, 10 fahaizanareo, 1 sampana in Bratsk, ny mpahay siansa famakiam-boky izay no iray amin'ny lehibe indrindra ao Rosia trano famakiam-boky Oniversite. ISU manome licence, tompony, Lahatsoratra-nahazo diplaoma fandaharan'asa bebe kokoa noho ny 18000 mpianatra izay manana fahafahana misahana eo ambany fanaraha-mason'ny izao tontolo izao-fantatra mpahay siansa.
Anisan'ireo toerana hafa Irkutsk State University dia manana ny Center for Advanced Fampiofanana sy Retraining, 3 fikarohana Institiota, Interregional Institute of Social Sciences, Information Center for New Technologies, Baïkal Research sy Education Center, sampan-draharaha ho an'ny lahatsoratra-nahazo diplaoma sy ny doctorat taranja, trano famakiam-boky siantifika, Momba ny Kintana sy ny fandinihana ny eny amin'ny zaridaina botanic.
Ny University-misaina sy ny andrim-panjakana dia hita ao amin'ny 9 fanabeazana trano in Irkutsk sy Bratsk. Ny ankamaroan'ireo trano ireo dia ny tantara be trano sy sarobidy. Mampiaraka izy ireo niverina ho any amin'ny faha-18-19 taonjato maro. Senior mpianatra rehetra manana ny toetsaina sy ny fampiofanana manokana ho internship amin'ny laboratoara sy ny fikarohana siantifika sy ny andrim-panjakana ny ISU Siberiana Sampana ao amin'ny Akademia Rosiana ny Siansa.
Fa ny am-polo taona, Irkutsk University no nampiofana mihoatra noho 80 arivo tena mahafeno fepetra manam-pahaizana manokana, mpahay siansa malaza, mpampianatra, mpanoratra, ary ny olom-panjakana, anisan'izany State loka mpandresy sy malaza mpanoratra manan-talenta V. Rasputin, A. Vampilov, ary M. Sergeev.
Na dia eo aza ny elanelana ara-jeografika amin'ny renivohitr'i Rosia, Moscow, Irkutsk sy Irkutsk Oblast, ny tarehy faritra ao amin'ny firenena, Na dia izany aza dia manana ny manan-karena tantara, Siberia toetrandro, ary lehibe fahafahana mitsidika mpianatra sy ny mponina samy.
1. Ny Irkutsk Oblast no misy ao amin'ny tena am-po ny Siberia. Ny renivohitra dia ny tanànan'i Irkutsk. Ny lavitra avy any Moscou ho Irkutsk dia dimy arivo kilometatra. Ny Oblast laharana faha 6 avy amin'ny 20 faritra ara-politika tany Siberia eo amin'ny lafiny faritra. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena manana sata amin'ny fifandraisana amin'ny maro firenena teo akaiky teo.
2. Ny tantaran 'ny Irkutsk Oblast maka ny voalohany amin'ny 1682 raha ny Domain (Voivode) ny Irkutsk niforona izay avy eo koa fanavaozan-drafitra ho faritany any 1719. Ao amin'ny rehetra ny Oblast, misy 2.700.000 mponina nampamoahana an'i 30% ny mponina tany Siberia Atsinanana. Ny tena tanàna ity no faritany ny tanànan'i Irkutsk, naorina in 1661, ary foana mandraka androany mihoatra noho 600,000 olona.
3. Ny Irkutsk Oblast dia miavaka toy ny manana ny mafy kontinanta be rivo-piainana amin'ny ririnina lava sy mangatsiaka amin'ny rivotra kely rotsak'orana. Na dia izany aza, ny lohataona dia fa mafana sy mando. Eo ho eo isan-taona ny mari-pana dia tsy excede 0ºC na aiza na aiza ao amin'ny Oblast.
Tamin'ny volana ny ririnina mangatsiaka indrindra, Janoary, ny mari-pana tandavan avy -20 mba -50ºC. Tamin'ny volana Jolay, ny nahamay indrindra volana, ny eo ho eo ny hafanan'ny + 18ºC amin'ny ambony indrindra + mafana ny 37ºC. Ny vanim-potoana lava indrindra dia ririnina, maharitra eo ho eo 180-200 andro. Indrindra indrindra amin'ny ririnina no manana ny tsy manam-paharoa afaka mieritreritra sy mankafy ny ririnina hatsaran-tarehy tao an-tanàna, faritra, ary Baïkal. Momba ny isan'ny andro clouds, Irkutsk sy ny faritra atsimon'i ny Oblast dia mitovy amin'ny Southern California, salan'isa 300 andro ny masoandro isan-taona.
4. Irkutsk androany dia lehibe ny indostria, akademika, ary ny ara-kolontsaina foibe. Ilay tanàna dia somary tsara toerana ny amoron 'ny ony Angara, 65 Km Farihin'i Baïkal.
Irkutsk dia an-trano ny iray amin'ireo sampan 'ny Scientific Academy, fihazonana valo Institiota ny siansa. Misy folo anjerimanontolo, valo amby enim-polo trano famakiam-boky, valo-polo sekoly, ny tantara an-tsehatra teatra, mozika teatra, saribakoly teatra, ankizy ny teatra, taova efitrano, toerana fialam-boly, trano fisakafoanana, ary maro be ny trano fisotroana kafe, rehetra miorina ao Irkutsk.
Institute ny Matematika, Toekarena sy ny Informatika
International Institute ny Toekarena sy ny Linguistics
Faculty ny Haiaina sy Soil Studies
Fianarana Faculty Ara-pivavahana sy ny Teolojia
Faculty of Service sy ny dokam-barotra
Faculty ny Philology sy Fanaovan-gazety
Irkutsk State University naorina tamin'ny Oktobra 27, 1918.
Ary nanome ny faniriana lalina mankany amin'ny fampandrosoana ny fianarana ambony tany Siberia sy ny Farany Atsinanan'i Rosia. Irkutsk State University lasa ny lehibe fanabeazana, ara-tsiansa sy ara-kolontsaina foibe eo amin'ny faritany midadasika ny Eastern Siberia indray. Tamin'ny voalohany ihany no nisy fahaizanareo roa tao amin'ny University: ny Faculty ny Tantara sy Philology sy ny Lalàna Faculty.
1919 Ny fanokafana ny Eastern Department izay Sanskrit, Mongoliana, Chinese, Tibetana, ary Japoney nampianarina. Fizika-Matematika Faculty naorina.
1920 Medical sampana lasa mahaleo tena Faculty.
1930 Fandaminana indray ny oniversite: fanafody, bola-toekarena, ary ny fanabeazan'Andriamanitra Institiota dia nanorina.
1941-1945 Nandritra ny Ady Lehibe mihoatra noho ny Tia Tanindrazana 100 mpikambana ao amin'ny oniversite mpiasa nankany amin'ny aloha.
1947 Ny Fizika sy ny simia fikarohana siantifika institiota dia naorina ho toy ny ampahany amin'ny oniversite
1949 Ny Haibolantany Faculty Natsangana.
Ny sampana ao amin'ny East-Siberia Academy ny Siansa dia nisokatra tao Irkutsk.
1950S Mpikaroka avy ao amin'ny anjerimanontolo niaraka tamin'ny mpiara-miasa ao amin'ny Irkutsk Geological Survey sy ny Eastern-Siberia sampana ao amin'ny Akademian'ny Siansa nandray anjara tamin'ny roject niafara tamin'ny fananganana ny herinaratra zavamaniry ao Irkutsk hery sy Bratsk.
1954 Ny Lalàna Faculty nosokafana.
1959 Computer foibe miaraka amin'ny fitaovana elektronika computing milina (ECM) nosokafana.
1966 Atombohy ny fanorenana trano vaovao tao amin'ny oniversite Akademgorodok. Ny trano dia nisokatra tao 1973.
faran'ny taona 1960 Ny vaovao-storeyed oniversite efatra trano no naorina nandritra ny efa-misaina sy ny departemanta.
1970 Ny Integrated Sovietika-Mongoliana Khubsugul iraka natomboka izay mitohy amin'ny oniversite sy ny Oniversitem-panjakana Mongoliana miaraka amin'ny fandraisana anjara mavitrika ny mpahay siansa avy amin'ny Siberia Sampana ao amin'ny Akademia Momba ny Siansa sy ny anjerimanontolo hafa avy any Irkutsk. Ny mpandray anjara ao amin'ny iraka nitondra ny mpiara voajanahary fianarana ny rano amin'ny rano famafazana, ny Khubsugul farihy sy rano mineraly ny Mongolia. Ary namoaka ny "Atlas ny Khubsugul Lake" sy ny sarintany "Mineral rano ny Mongolia."
1991 ISU tonga eo ambany fanaraha-maso-panjakana Komitin'ny ny Siansa sy ny Fampianarana Ambony ny RSFSR (Rosia)
1993 Ny Faculty ny Psychology sy Social rafiny dia nisokatra.
1998 Baïkal Deep Underwater Neutrino teleskaopy natomboka ho nampiasaina, ary mandraka androany mbola ny hany mpanao teleskaopy ny karazany eto amin'izao tontolo izao.
2000 Ao amin'ny Tunkinskaya Valley ny eran-zorony cherenkovsky fametrahana ho an'ny fizika ampiharina dia naniraka.
2001 Ny Interregional Institute of Social Sciences natsangana mba hitondra-ny tetikasa "Siberia any Rosia sy ny World: Miantso ny Paikady ho an'ny Fampandrosoana. "
2011 NY ANY, miaraka amin'ny 55 anjerimanontolo hafa any Rosia, nandresy tamin'ny fifaninanana nokarakarain'ny Ministeran'ny Fanabeazana sy ny Siansa ao amin'ny Federasionan'i Rosia noho ny fanohanana ny fandaharan'asa ho an'ny stratejika
fampandrosoana. Ny fandaharana nanome fanohanana ny fikarohana siantifika sy ny famoronana ny siansa-pampianarana sarotra izay mitohy amin'ny Institiota Fianarana ny Irkutsk Siantifika foibe
ny Siberia Sampana ao amin'ny Akademia Momba ny Siansa.
2013 Ny Minisitry ny Fanabeazana sy ny Siansa ao amin'ny Federasiona Rosiana nanambara ny fampidirana ny Irkutsk pedagojika Institute panjakana eo ambany ISU.
Ianao ve mila hadihadio Irkutsk State University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Irkutsk State University ao amin'ny Map
Photos: Irkutsk State University ofisialy Facebook
Irkutsk State University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Irkutsk State University.